Korantada buluuga ah, midabka casriga ah iyo geesinimada gurigaaga | Bezzia
Korantada buluuga ah, midabka casriga ah iyo geesinimada gurigaaga
Maria vazquez | 10/01/2022 20:00 | Isbeddellada qurxinta
Haddii aad raadinayso midab aad ku siiso a qoraal casri ah oo geesinimo leh gurigaaga, Mar dambe ha ka fikirin, buluug koronto waa midabkaaga. Ma dhihi karno waa midabka isbeddelka sida Peri aad u badan, Midabka Pantone ee sanadka 2022, ka sii xun ayaa had iyo jeer ah beddelka wanaagsan si loo gaaro meelo ay ka buuxan shakhsiyad.
Qolkaagu ma u baahan yahay dhimbiil? Ma garanaysaan sida loogu daro dabeecada qolka jiifka cad iyada oo aan la gelin maalgashi weyn? Haddii aad ku dhiirato wax ifaya, buluug koronto waxay noqon doontaa saaxiib weyn. Waxaad rinji kartaa derbiga ama albaabbada midabkan haddii aad rabto inaad wax walba ku jebiso ama aad si qarsoodi ah u isticmaasho alaabta yaryar ama walxaha farshaxanka. Bezzia waxaanu kula wadaagaynaa fikrado maanta.
Waxay u ekaan kartaa midab adag in lagu dhex daro qurxinta guryahayaga, laakiin taasi liddigeed; buluug koronto waa midab aad u kala duwan oo si fiican ugu dara midabyo kale oo badan. Waa midab cajiib ah, oo aan la dafiri karin, waana sababta ay muhiim u tahay in la ogaado ilaa inta aan rabno inaan nafteena halis gelinno ama sida aan u dhiirrannahay, sababtoo ah waqti ka dib way nagu daali kartaa.
Qolka fadhiga, qolka cuntada iyo qolka jiifka Waa qolal aan ku ciyaari karno buluugan cabsi la'aan, waxaanan diirada saarnay maqaalkan. Ma u baahan tahay fikrado aad ku dari karto mid iyo kan kale? Maanta waxaad ka heli doontaa xulashadayada sawirada dhammaan dhiirigelinta aad u baahan tahay inaad sameyso.
1 Qolka cuntada
2 Fasalka dhexdiisa
3 Qolka jiifka
Markaad eegto sawirada soo socda shaki kuma jiro: kuraasta waxay noqdaan beddelka ugu caansan ee isku dhafka buluugga korontada ee qolka cuntada. Miyayna fikrad fiican ahayn inaad ku rinjiyayso ama dib u dhejiso kuraastii hore adigoo isticmaalaya buluug koronto ah? Markaa waxaad siin kartaa nolol labaad oo waxaad ku heli kartaa taabasho casri ah oo geesinimo leh qolkaaga qadada isla waqti isku mid ah.
Ma waxaad raadinaysaa beddelaad kale oo asal ah? Ku sharad rinjiyeynta muraayadaha miiska saaran midabkan ama ku dhiirranow dhig armaajo buluug ah miiskaaga alwaaxa agtiisa. Ha ka waaban inaad rinji derbi ah midabkan haddii aad rabto in aad si weyn u siiso qolka cuntada gudaha meel bannaan oo weyn sida jikada ama qolka fadhiga.
Qolka fadhiga badanaa waa qolka ugu weyn ee guriga, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku dhiirato wax dhab ah oo cajiib ah. Maxaa diidaya gidaar rinji Mise albaabbada gudaha ku jira oo buluug koronto ah? Waxay noqon doontaa naxdin, taas shaki kuma jiro. Maxaa dhacaya haddii aad ku sawirto golaha wasiirada ee TV-ga gidaarkaan rinji buluugga ah? Waa fikrad qurux badan qolka fadhiga sida kan sawirka ka muuqda oo leh dabaqyo madow iyo darbiyo midab khafiif ah iyo alaab guri.
Fadhi fadhiga, kursi cufan ama kiish waa siyaabo kale oo lagu dhex dari karo midabkan casriga ah iyo geesinimada qolka fadhiga. Waxaadna samayn kartaa iyada oo aan loo eegin qaabka qolkan sida aad ku arki karto sawirka kore. Natiijadu waa dhiirranaan laakiin haddii aad u isticmaasho midabyo dhexdhexaad ah dhammaystir ahaan waxaad iftiimin doontaa booska.
Shaqooyinka fanka iyo dunta Waa hab kale oo lagu daro burushyada buluuga ah iyada oo aan aad loo cuslayn. Buste saaran fadhiga fadhiga oo leh cod guduudan, weel miiska kafeega saaran ama farta joomatari ee gidaarka ayaa kugu filan.
Madax buluug koronto ah waxay awoodi doontaa inay beddesho qolka jiifka oo dhan. Ka dib oo dhan, tani waa derbiga ugu weyn ee qolka, halkaas oo dhammaan indhaha sida caadiga ah loo hago. Ma doonaysaa in aad halis dheeraad ah gasho? Ku rinji ama ku dabool derbiga buluug oo ku dar barkin isku midab ah sariirta si aad u abuurto sii socosho.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa kan buluugga ah dhexda gogosha, oo leh dabool daboolan ama maro sariirtaada ah oo ku labisan dhar cad. Caddaan waa, shaki la'aan, mid ka mid ah midabada lagu daro buluug koronto, laakiin maaha mid keliya; nuances yar oo dhan casaan, liin, mustard ama cagaar, Waxay si fiican ugu habboonaan doonaan kan.
Ma jeceshahay buluug koronto? Ma ku dhiiratay in aad ku dhex darto qurxinta gurigaaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Isbeddellada qurxinta » Korantada buluuga ah, midabka casriga ah iyo geesinimada gurigaaga
Dharka iyo kabaha sare, isku-dhafka saxda ah ee jiilaalka